Sawiro:Xildhibaanada Galmudug oo deeq gaarsiiyay dad abaaruhu saameeyeen - Ceelhuur Online
Home > Wararka Galmudug > Sawiro:Xildhibaanada Galmudug oo deeq gaarsiiyay dad abaaruhu saameeyeen
Sawiro:Xildhibaanada Galmudug oo deeq gaarsiiyay dad abaaruhu saameeyeen
February 1, 2017 Duceysane582
Deeq daan ay xildhibaanada katirsan dowlad goboleedka galmudug ay soo gaarsiiyeen Qaarkamida dadka abaaruhu saameeyeeyn oo usoo barakacay gudaha magaalada cadaado Ayaaa waxaa ay kakoobneyd bariis iyo saliid.
Qoysaskaan ay xildhibaanada galmudug ay deeqda gaarsiiyeeyn ayaa kakoobnaa 100 qoys oo Kamida dadka abaaruhu saameeyeen waxaana dadkaani qaarkood ay yihiin kuwo ay abaartu Udheereyd colaado sababay iney deegaanaadooda isaga soo barakacaan.
Ugu horeyn ayaa waxaa goota kahadlay gudoomiyaha gudiga abaarah ee xildhibaanada Galmudug Canab Maxamd Cosoble ayaa sheegtay in deeqdaan ay hordhac utahay deeqo ay Xildhibaanada galmudug ugu talagaleen in lagaarsiiyo dadku abaruhu saameeyeen.
Xildhibaan Cabdulaahi Cumr Maxamuud oo kamida xildhiaanaada daadkaan deeqda soogaarsiisay ayaa sheegay in deeqdaan qoysaska lagaarsiiyay ay tira ahaanyihiin boqol qoys Islamarkaan deeqdaan ay xildhibaanadu ugu talagaleen dadka aabaareysan.
Qaarkamida dadka abaartu saameyay ee deeqdaan lagaarssiiyay ayaa kamahad celiyay Deeqdaan ay xildhibaanada galmudug soo gaarsiiyeeen.
Deegaanada galmudug ee abaartu sida ba,an usaameysay ayaa waxaa kamida deeganada bari Ee gobolka galgaduud.
Waxaana abaartu hada ay mareysaa heerkii ugu xumaa dadka qaar ayaa waxaa tirada Dhimashada xoolaha ay mareysaa 500 oo neef (shan boqol oo neef)
Ciidamo xoog kula wareegay Xarunta Wasaaradda Maaliyadda Puntland ee Qardho